YEYINTNGE(ကနဒေါ): Saturday, September 24
BY YeYint Nge ... 9/24/20110comment
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာအရမ်းအရမ်းကို အကျင့်ပျက်နေပါ၍ တင်ပြပါရစေ။
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ကြံ့/ဖွတ် ပါတီမှ ပါတီစိတ်မှူးတစ်ယောက်အဖြစ်မှနေ၍ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်သို့ ၂၇.၆.၂၀၁၁တွင် ခန့်အပ်ခံရသူဖြစ်ပါသည်။ ခန့်အပ်ပြီး ၂ရက်အကြာတွင် ရပ်ကွက်အတွင်း လူငယ် ချင်း စကားများ ၇န်ဖြစ်၍ ရပ်ကွက်ရုံးသို့ လာရောက်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုအပေါ် ငွေကျပ်တစ်သောင်း တောင်းသည့် ကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လိပ်မူတိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
နောက်နှစ်ပါတ်ခန့် အကြာတွင် ရပ်ကွက်ရုံးခန်းတွင် တီဗွီ အပေါ်စက်အောက်စက်ဝယ်ရန်ဆိုပြီး ပြည်သူအချို့ထံ အလှူခံပြီး ရရှိသော ငွေဖြင့် တီဗွီအသစ်တစ်လုံးဝယ်ယူခဲ့သော်လည်း ရပ်ကွက်ရုံးတွင် မထားရှိဘဲ သူ၏နေအိမ်တွင် ထားပြီး သူ၏အိမ်မှ တီဗွီအဟောင်းအစုတ်တစ်လုံးအား ရုံးခန်းတွင် ထားရှိခြင်းကြောင့် လှူထားသော အလှူရှင်များမှာ မကျေနပ်ဖြစ် နေကြပါသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်စီမံချက်ဖြစ်သည့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲသားလျော့နည်းရေးစီမံချက်ဖြင့် ငွေစု ငွေချေး စီမံချက်အပေါ်တွင် အစုထည့်ဝင်ငွေ (၁၀၀၀၀ိ/)ကျပ်ထည့်ဝင်သူတိုင်း (၃၀၀၀၀ိ/)ကျပ်ရရှိမည်ဟု ဆိုကာ အစုငွေ(၁၀၀၀၀ိ/) ကျပ် မထည့်နိုင်သော ဆယ်/ရာမှူးများနှင့် အချို့ဆင်းရဲသားများအား မိမိစိုက်ထည့်ပေးမည်ဟုဆိုကာ စိုက်ထည့်ပေးပြီး ချေးငွေ (၃၀၀၀၀ိ/)ကျပ်ရသည့်အခါ မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်သူထည့်ဝင်ထားသော (၁၀၀၀၀ိ/)ကျပ်အား ၂၀၀၀ိ/ ကျပ် အတိုးနှုန်းပေးရမည်ဟု စိုက်ထည့်ထားသောနှစ်ရက်တာ ကာလအတွက် အတင်းအဓမ္မတောင်းယူပါသည်။
ဒါကြောင့် ဆင်းရဲသားအချို့နှင့် ဆယ်/ရာမှူးများမှာ မကျေနပ်ကြပါ။
ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှ သိမ်သမုဒ်သည့်နေ့တွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့ လိုအပ် သော အကူအညီများပေးရန် ဘုန်းကြီးမှတောင်းဆိုသောအခါ ဘုန်းကြီးအား ဆယ်/ရာမှူးများ စားသောက်ရန် ဆိုပြီး သုံးသောင်းကျပ်တောင်းယူသွားပါသည်။ သို့သော်ဆယ်/ရာ အိမ်မှုးများပင် မသိရှိကြပါ။
လွန်ခဲ့သော တစ်ပါတ်ခန့်ကလည်း ရပ်ကွက်အတွင်း နှစ်လုံးထီရောင်းသော အမျိုးသမီးအား မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးသောအခါ “ငါ အမှုပေါ့အောင် လုပ်ပေးမယ်။ ငါ့ကို ပိုက်ဆံတစ်သိန်းပေး” ဟု ဆိုကာ အတင်းအဓမ္မတောင်းယူသွားပါ သည်။ ၄င်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ဆယ်/ရာမှူးများ အစည်းအဝေးတွင် မိမိအား ၀န်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေမှ ခန့်အပ်ထား သူဖြစ်ကြောင်း မည်သူမှ သူ့ကို မဖြုတ်နိုင်ကြောင်းလည်း အစည်းအဝေးတွင် ကြွေးကြော်ပါသည်။
အဆိုပါ အချက်များအပြင် ရပ်ကွက်လုပ်သားပြည်သူများအနေဖြင့် ယခင်ထဲက အကျင့်ပျက်များဖြင့် အစစအရာရာ နာမည်ပျက်သတင်းကျော်ကြားနေသည့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာသူအား လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ပေး ပါရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ အပေါင်းအား ပြောပေးပါ ခင်ဗျာ။
BY YeYint Nge ... 9/24/2011 1 comment
ပြန်သွားသူတွေက ကျန်ခဲ့ သူတွေကို သစ္စာဖေါက်သူများအဖြစ် ပြောဆိုနေကြလေတော့
သီးလေးသီးအဖွဲ့ ကို ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖြစ်သည်။ စိတ်၏ထွက်ပေါက်အဖြစ် ရီစရာတွေကို ကြည့်ကြရသည်။ ပျက်လုံးများကို နားထောင်ပြီး စိတ်အပျော်များ ရရှိခဲ့ ကြသည်။ ထို့ ကြောင့်လည်း ထင်သည်။ သူတို့ အား ကမ္ဘာတပါတ်ခေါ်ပြီး ကိုရွှေမြန်မာတို့ က လက်ခုပ်သံကြားထဲက ရီရီမောမောနှင့် အားပေးလိုက်ကြသည်မှာ နိုင်ငံတိုင်းလိုလို ဖြစ်နေသည် ။ ခုတော့ ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်တွေက မစင်စားသောပါးစပ်မျိုးဖြင့် သူတို့လူတွေကို စော်ကားသွားပြီ ။ ပြည်ပမှာ လုပ်စားနေကြတာပါဟု ပြောသောသူတို့ မှာ သူတို့ ကို ကောင်းကောင်းကြီး ခေါင်းပေါ်တင်ခဲ့ သူများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကဲ့ သို့ခေါင်းပေါ်တင်ခဲ့ သူများကို ဘာကြောင့်များ စော်ကားလေသနည်း ။အေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားရုံတင်မက ဇိမ်နဲ့ ဘဲ နေနေ မည်သို့ မျှ ပြောစရာမရှိ ။ လမ်းတ၀က်က ခါးကျိုးပြီး ပြန်သွားသူတွေကို ဂရုစိုက်စရာမှ မလို ။ ခုလည်းနောက်တယောက် ဂေါ်ဇီလာပြောသလို ပြောပြီ ၊ သူကား အဆင့်အတန်းမရှိသူ ဂေါ်ဇီလာလို မဟုတ်။
၈၈ - အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း ပြည်ပနိုင်ငံတွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိင်ငံ အမျိုးသားညွန့် ပေါင်းအစိုးရ မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လုပ်ခဲ့ သူ ပီတာလင်းပင်ဖြစ်သည် ။ ဦးပီတာလင်းပင်ကို လူတိုင်းလေးစားကြပါသည်။ သို့ သော် သူကလည်း ယခုပြည်ပကလူတွေကိုချပြီ ။ ပြည်ပမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေက တဦးကို တဦး မလေးစားတဲ့။ သမတဦးသိန်းစိန်က လက်ကမ်းတာကို လက်ခံရမယ်တဲ့ ၊ မပယ်ချသင့်ဘူးတဲ့၊ လူပျက်တွေက ပြောချင်ရာ ပြော၍ ဆိုချင်ရာ ဆိုခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ဘာမျှ ပြောစရာမရှိ ။ ခုတော့ နိုင်ငံရေးလောက ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်။ တခုခုတော့ ကျွန်တော်တို့ပြောရမည် ။ အကယ်၍ သူတို့ သာ မပြန်ဖြစ်ခဲ့ လျှင် ခုလောက်ဆိုက အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တခုခုကို ဖန်တီးစရာ ဖြစ်နေအုံးမည်ထင်သည်။ အကြောင်းမှာ အခုအချိန် သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဍမောင်လွင်နှင့် သမတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်တို့ မှာ နယူးယောာက်မြို့ ရှိ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ တက်ရောက်ရန် ရောက်ရှိနေကြသည်။ အကယ်၍ အမေရိကန်အစိုးရမှ ကြားဝင်စေစ့ပ်ပေးမည့်သူ တဦးဦးက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့် ပေါင်းအစိုးရနှင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးစေရေးအတွက်ကို၎င်း၊ နယူးယောက်မြို့ ရှိ ဒီမိုကရေစီ အ၀ိုင်းအ၀န်းမှ အင်အားစုများနှင့်၎င်း ၊ သူတို့ နှင့် တွေ့ ဆုံပွဲ တခုခုကို ပြုလုပ်လာခဲ့ လျှင် ဦးပီတာလင်းပင်မှာ ဂုဏ်သရေရှိစွာဖြင့် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ခုတော့ လမ်းတ၀က်မှာ တက်ကျိုးသည်မဟုတ် ။ လက်ကျိုးခြေကျိုးစွာနှင့် ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာဘ၀မျိုးဖြင့် သူတို့ပြည်တော်ကို ပြန်သွားကြလေပြီ ။ ထို့ ကြောင့် ဂုဏ်သရေရှိသော နိုင်ငံရေးသမားတဦးမှာ ရစရာမရှိအောင် နိုင်ငံရေးသိက္ခာ စုတ်ပြတ်သွားသည်။ ပြန်သွား၍ သူ့ ဖါသာ သူစုတ်ပြတ်သွားခြင်းကို ဘာမျှပြောစရာ မရှိ။ သူ့ အကြောင်းနှင့် သူ သွားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ခုတော့ ပြန်သွားသူက ကျန်ခဲ့ သူကို တော်လှန်ရေးအပေါ်မှာ သစ္စာမဲ့ သူများအဖြစ် ဖေါ်ပြပြောဆိုနေခြင်းကတော့ မပြုလုပ်ကောင်းပေ ။ နိုင်ငံတကာရှိ နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာ တဦးကို တဦး မလေးစားကြဟု ပြောဆိုနေခြင်းမှာ တရားမဲ့ လွန်းရာ ကျသည်။ သူပြောသလိုဆိုလျှင် သူရှိနေစဉ် ပြောဆိုခဲ့ ရမည်။ ခုတော့ သတ်ကွင်းထဲမှာ ရောက်နေခဲ့ ပြီးမှ ပြောဆိုသော သူ့ စကားမှာ ဘာမျှ အဓိပ္ပါယ်မရှိချေ။ အဓိကမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးတို့ မှာ ပြည်ပနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်မှူအများကြီး ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုငံတွင်ဆိုလျှင် မပြောနဲ့ တော့ ။ ဦးပီတာလင်းပင်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ် ထောက်ပြဖို့ ကောင်းခဲ့ သည် ။ ပြောဆိုဖို့ကောင်းခဲ့ သည်။
သို့ သော် သူကား နေရာမှားမှာ စကားပြော မှားခဲ့ပြီ ။ ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော်က သူ့ စကားကို ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကသာ ခုလို တက်ကြွစွာ မလှုပ်ရှားဘဲ နေခဲ့ ကြလျှင် ခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သိန်းနှင့်ချီပြီး ရှိနေလိမ့်မည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ပင် လွပ်မြောက်နေချင်မှ လွပ်မြောက်နေလိမ့်မည် ။ ယင်းမှာ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်မှူများ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ယင်းရလဒ်ကို ဦးပီတာလင်းပင် သိရှိမည်ထင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မှာ ပြည်တော်ပြန်သွားသုများကို မပြန်နဲ တေ့ာ့ဟု ပြော၍ရသူများလည်း မဟုတ် ။ ပြောစရာလည်းမလို ။ ပီတာလင်းပင် ပြန်မည့်သတင်းကို ကျွန်တော်တို့ကြားသိထားသည်မှာ ကြာပြီ ။ သည်တော့ သူတို့ပြန်သွားတော့ ကျန်တဲ့ သူများက ဆက်ပြီး လုပ်စရာတွေလုပ်ရုံပါ့ ။
မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ပြန်သွားသူများက ကျန်ခဲ့ သူများကို ရစရာမရှိအောင် ပြောသည်မှာတော့ မလိုအပ်ဟု ထင်သည်။ လိုအပ်သည်ဟု ထင်လျှင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း သူတို့မည်သို့သွားခဲ့ ရသနည်းဆိုသည်ကို ဆန်းစစ်ရဖို့ ဘဲရှိလာသည် ။ သူတို့ပြည်တော်ပြန်သွားသည်မှာ လွယ်လွယ်ကလေးနှင့် ပြန်သွားရလျင် ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားရ ပီတိ ဖြစ်မိမည် ။ ခုတော့ ယင်းသို့ ယင်းနှယ် မဟုတ်၊ သူတို့ မှာ ပြည်တော်ပြန်ဖို့အတွက် ဂတိခံဝန်ချက်တွေကို လက်မှတ်ထိုးရသည်။ သာမန်လူပျက်တွေ ဖြစ်သော ဂေါ်ဇီလာလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အခုလို လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားရခြင်းမှာ ဘာမှ ပြသနာမရှိ ။ သူတို့ မှာ နိုင်ငံရေးသမား သိက္ခာလည်းမရှိ၊ လူရွှင်တော် သိက္ခာလည်း မရှိ် ။ အစောင်တရာလည်း သူတို့ထိုးလို့ ရသည် ။ သို့ လင့်ကစား နိုင်ငံရေးသမားတွေက ပြည်တော်ပြန်သွာဖို့ အရေးမှာ အခုလို ဂတိခံဝန်ခံချက်မှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရပြီဆိုကတည်းက ဘ၀ပျက်ကိန်း ဖြစ်သွားရပြီ ။ တသက်လုံး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် နေခဲ့ သော သူတို့ မှာ ယုံကြည်ချက်ကို စွန့် လွှတ်ပါသည်ဟု လက်မှတ်ထိုးရတော့ လောကအလယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံစည် စရာဘဲ ကျန်တော့သည်။
သူတို့ပြည်တော်ပြန်သွားသည်မှာ လွယ်လွယ်ကလေးလို့သမတဦးသိန်းစိန်က လာခဲ့ တော့ဆို၍ သွားလိုက်တာပါဟု ပြောသောစကားကို ယုံကြည်နိုင်စရာ မရှိချေ ။ ဂတိခံဝန်ချက်တွေမှာ လက်မှတ်တွေ ထိုးပြီး မျက်နှာအောက်ကျို့ခံကာ နေသွားရတော့မည်ကို တွေးမိသည်။ The Voice ၈ျာနယ်မှာ အင်တာဗျူး ပေးထားသော ဦးပီတာလင်းပင်မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေနှင့် မေးတာဖြေတာတွေ့ ရသည်။ ပြန်သွားသူတွေက ကျန်ခဲ့ သူတွေကို သစ္စာတရားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရှုတ်ချ ပြောနေသမျှကတော့ သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မြှောက်စားတာ -တမနက်ဘဲ ဖြစ်လိမ့်မည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကို မလွှတ်ဘဲ ထားသော အစိုးရမှာ ပြည်တော်ပြန်လာသော နိုင်ငံရေးသမား သစ္စာဖေါက်ကို နေရာပေးလိမ့် မည်ဟု ခံယူထားလို့ ကတော့ ဘာဖြစ်မှာလဲ ဟု ဦးပီတာလင်းပင်က ဂေါ်ဇီလာကို မေးရုံဘဲ ရှိနေတော့သည်။ အကယ်၍ သူတို့ နှစ်ယောက်က ( ၆၅ ) နှင့် လိုက်မှာလားဟု မေးလို့ ကတော့ မေးတဲ့ သူက ဖြေကြားသူရှာမတွေ့ ဘဲ သူတို့ ကိုယ်တိုင် မကြာခင် လိုက်ပါသွားရရင်ဖြင့် ကျန်ရစ်သူများက တခါပြန်ပြီး ရီနေရအုံးမည်ဟု ပြောရုံဘဲ ရှိတော့သည်။
24 Sep2011 Yeyintnge's Diary
အမုန်းခံစိတ်နှင့် သင်ယူနေရဆဲ ဗမာစကား
Saturday, 24 September 2011 07:06 မြတ်ပန်းရှင်
“သင်ပြောဆိုတဲ့ ဘာသာစကား အသစ် တစ်ခုတိုင်းအတွက် ဘ၀အသစ် တစ်ခုစီကို ပိုင်ဆိုင် နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဘာသာစကား တစ်ခုမျှသာ သိတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ တစ်ကြိမ်မျှသာ ရှင်သန် နေထိုင်ခွင့် ရှိနေတယ်။”
ဒီ ချက်လူမျိုးများ၏ စကားပုံကလေးမှာ ဥရောပ ဘာသာစကားများနေ့ ကြွေးကြော်သံ ဆောင်ပုဒ်လည်း ဖြစ်လို့နေသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့သည် “၁၀ ကြိမ်မြောက် ဥရောပ ဘာသာစကားများနေ့” နေ့ထူးနေ့မြတ်တစ်ရက် ဖြစ်ပါသည်။ ညီလာခံသဘင်များ၊ ပဟေဠိပြိုင်ပွဲများ၊ ကဗျာ ရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲများ၊ လမ်းမပေါ်က အားကစားပွဲများဖြင့် ဥရောပ အနှံ့အပြားတွင် ဆင်ယင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥရောပ ကော်မစ်ရှင်အဖွဲ့က ကြေညာချက်ထဲတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
အဓိက ရည်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘာသာစကားများ သင်ယူရေးကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက်နှင့် ဥရောပ၏ ဘာသာစကား ထွေပြားစုံလင်မှုကို ဂုဏ်ပြု ဆင်ယင် ကျင်းပပေးရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ အီးယူ၏ တရားဝင် ဘာသာစကား ၂၃ မျိုး အပါအ၀င် ပူးတွဲ တရားဝင်ဘာသာစကားများ၊ ဒေသန္တရသုံးစကား၊ လူမျိုးနွယ်စု စကားများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားစုံလင်မှုနှင့် လူငယ်ရေးရာ ကော်မစ်ရှင်နာ အန်ဒရိုအူလာ ဗာစီလီအိုနှင့် ဥရောပ ကောင်စီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး သော့ယန် ဂျဂလန်တို့အတူ ပူးတွဲ ကြေညာချက်လည်း ထုတ်ပြန်ကြမည်။ ဘာသာစကား ထွေပြားစုံလင်မှုအတွက် သူတို့၏ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ရမည့် ကတိက၀တ်ကို ထပ်မံ အတည်ပြု ပေးခြင်းလည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားစကားတွေ အများကြီး ပြောကြစို့
ပိုလန်က ဥက္ကဌ နေရာ တာဝန် ယူထားသော အီးယူ၏ အာဂျင်ဒါထဲတွင် ဘာသာစကား သင်ယူမှုကို အမြင့်ဆုံး ထည့်သွင်း ထားရှိပါသည်။ မိခင်ဘာသာစကားအပြင် အခြားသော ဘာသာစကား ၂ မျိုးကိုလည်း သင်ယူလေ့လာရန် လူငယ်ထု တစ်ရပ်လုံးကို တိုက်တွန်းထားသည်။ ပုဂ္ဂလ ရည်မှန်းချက်များအပြင် အလုပ်အကိုင် အတွက်လည်း အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
“မိခင်ဘာသာစကား အပြင် အခြားသော ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို တတ်မြောက်ထားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ လက်တွေ့ကို အလွယ်တကူ မြင်တွေ့နိုင်တာပါ။ ဂျာမဏီမှာ ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်မလား၊ ပြင်သစ်မှာ ပညာ သွားသင်ချင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆိုက်ပရပ်မှာ အပန်းဖြေခရီး ထွက်မလား၊ ဒေသခံတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆို နိုင်တာကတော့ဖြင့်ရင် အင်မတန်မှ အကျိုးများလှတယ်။ ဘာသာစကားတွေဟာ စိတ်ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးတယ်။ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါင်း များစွာကိုလည်း ခံစားနိုင်ပြန်တယ်။ အလုပ်ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းလည်း တိုးပွားတယ်လေ။” ကော်မစ်ရှင်နာ ဗာစီလီအိုက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘာသာစကား ထွေပြားစုံလင်မှု
တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ထွေပြားစုံလင်လှပြီး ဘာသာစကားလည်း ပေါများ ကြွယ်ဝလှသည့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်လည်း ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တိုင်းပြည် တည်ထောင်ရန်အတွက် ဘာသာစကား တတ်မြောက်မှုမှာ အရေးကြီးလွန်း နေသည်။ မိခင်ဘာသာစကားအပြင် အခြားသော ဘာသာစကားတို့ကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပြောဆို တတ်မြောက်သင့်လှပါသည်။
မတူကွဲပြားသည့် ယဉ်ကျေးမှုများကို ခံစားသိမြင်ပြီး သဟဇာတဖြစ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တို့အတွက် မိခင်ဘာသာ စကားအပြင် အခြားသော တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများနှင့် အိမ်နီးချင်း တိုင်းပြည်၏ ဘာသာစကားတို့ကိုလည်း တတ်မြောက် ထားသင့်ပါသည်။
မိခင်ဘာသာစကား၊ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတို့ကို သင်ကြားခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်း၊ တားဆီးဟန့်တားခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်းတို့မှာ အလွန်ပင် ဆိုးဝါးလှပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများစွာကို အားလုံးက ခံစား နေရပေပြီ။ မိမိလူမျိုးစုကိုလည်း မချစ်တတ်၊ အခြားသော တိုင်းရင်းသားများနှင့်လည်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီး၊ ငြိမ်းအေးစွာ မနေတတ်သော လူများအဖြစ် ကြီးပြင်း လာနေကြရာ ဤတိုင်းပြည်၊ ဤဒေသ၊ ဤလူမျိုးစု၏ အနာဂတ်အတွက် ရင်လေးဖွယ်ရာပင်။
မိခင်ဘာသာစကားကို ပိတ်ပင်တားဆီး၊ နှောက်ယှက်မှု၏ ဆိုးကျိုး များစွာထဲက တစ်ခုမှာ ဗမာ (မြန်မာ) စကားကို မုန်းတီးစိတ်နှင့် သင်ယူနေရကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းစစ် ဒေသများနှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများ၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတို့မှာ မိမိစကားလည်း သင်ခွင့်မရ၊ ဗမာ (မြန်မာစာ) ကိုလည်း မိမိရွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေသော စစ်တပ်အပေါ် အမုန်းခံစိတ်ဖြင့် သင်ယူနေရပြန်သည်။
လွှတ်တော်ထဲတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောဆိုရန် တိုင်းရင်းသား အမတ်မင်းများက ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အကြံပြုကြမည်ဟုလည်း မောက္ခက သတင်းများ ကြားသိရပါသည်။
Maybe, it isagood idea for the future of Burma, MPs. Good on you. Carry on. Speak out, men. You can do it. Why don't you speak ethnic languages in your State Parliaments? Don't be afraid, ethnic MPs.
တိုင်းရင်းသားများကလည်း မြန်မာ (ဗမာ) စကားကို မပြောချင်ကြတော့။ မသင်ယူချင်ကြတော့။ အမုန်းခံစိတ်ဖြင့် သင်ယူနေရလေရာ ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်မှု ပြဿနာ ရှိနေလေသည်။ သို့ဖြစ်လေရာ တစ်ဦးချင်း၊ လူမျိုးနွယ်စု တစ်မျိုးချင်း၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုသာလျှင် မကတော့ဘဲ တိုင်းပြည်ပါ နစ်နာလှလေသည်။
အိမ်နီးနားချင်း ချစ်ကြည်မှုနှင့် ထိုင်းရဲကို ရိုးသားစွာ နေထိုင်ပါကြောင်း ရှင်းပြနိုင်ရေးတို့ အတွက် မောက္ခ ပညာရေး မဂ္ဂဇင်း ၀ိုင်းတော်သားများလည်း ဖုဖါ့စာထိုင်းကို ကိန်မမ ဖြစ်ရေး အားထုတ်နေရပါကြောင်း။
Source: EU & မောက္ခ
ဂြိုလ်တု ပျက် စနေ နေ့ အစောပိုင်း အမေရိကန် နိုင်ငံ ပေါ် ကျရောက် နိုင်
by politics on September 24, 2011
ကမ္ဘာ့ လေထု အထက်လွှာ ကို စောင့်ကြည့် ဖို့လွှတ်တင် ထား တဲ့ ဂြိုလ် တု တစ်လုံး က အပိုင်း
အစ တွေ ဟာ စနေ နေ့ မနက် အစော ပိုင်း မှာ ကမ္ဘာ့လေထု ထဲ ကို ၀င်ရောက် လာ ပြီး မြေပြင်
ကို အရှိန် နဲ့ကျလာ လိမ့် မယ် လို့အမေရိကန် အမျိုး သား အကာသ သိပ္ပံ နဲ့လေကြောင်း
အေဂျင်စီ (NASA) က သတိပေး ချက် ထုတ်ပြန် ထား ပါတယ်။
ခြောက်တန်း ခွဲ အလေး ချိန် ရှိ တဲ့ ဒီဂြိုလ်တု ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ် မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံ က အိုဇုန်း
လွှာ လေ့လာ ဖို့လွှတ်တင် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှာ ရပ်နား ခဲ့ ပါတယ်။
ဂြိုလ် တု က အပိုင်း အစ တွေ ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံ ထဲကို ကျဖို့ဖြစ် နိုင်ခြေ ပို များ တယ်လို့ 
နာဆာ က အခု နောက် ဆုံး သတင်း ထုတ် ပြန်ထား ပါတယ်။
၆ တန် လေး တဲ့ ဒီဂြိုလ် တု ရဲ့ကျန်တဲ့ အပိုင်း တွေ ဟာ အပြောကျယ် တဲ့ အာကာသ ထဲ ကို
မျောလွင့် သွား မှာ ဖြစ် ပြီး ကျန် တဲ့ ကျန် တဲ့ အပိုင်း ၂၆ ခု က တော့ ကမ္ဘာ မြေပြင် ကို ပြန်လည်
၀င်ရောက် လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတော့ ကမ္ဘာ မြေပြင် ရဲ့၇၀ ရာ ခိုင် နှုန်းလောက် ကို ဖုံး အုပ် ထား တဲ့ သမုဒ္ဒရာ ရေပြင် ထဲ
ကို ကျသွား မယ် လို့ခန့် မှန်းထား ပေမယ့် အပိုင်း အစ တွေ ရဲ့အချို့ဟာ မြောက် အမေရိက
တိုက် ထဲ ကို ကျ နိုင် တယ် လို့ခန့် မှန်း တွက် ချက် ထား ပါတယ်။
ဂြိုလ်ပျက် ဟာ တစ်နာ ရီ ကို မိုင် ၁၀၀ ကျော် နှုန်း နဲ့ကမ္ဘာ မြေပြင် ဆီ ကို ပြန်လည် ၀င် ရောက်
မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
တာရာဝေယံ၊ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၁
ယမန်နေ့က နာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ ဧရာဝတီကို ထာဝရရှင်သန်စေလိုသူများက ဧရာဝတီကာကွယ်ဖို့ လှုံဆော်ပွဲကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ကျင်းပတဲ့ ပွဲမှာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ပြီး ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ဖို့ ပြည်သူလူထုကို လှုံဆော်တဲ့ ကဗျာ၊ သီချင်း၊ အက်ဆေး၊ စာတမ်းများ ရွတ်ဆိုဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။
အနဂ္ဂ၊ ရန်ရန်ချမ်း၊ ရဲတိုက်၊ ဇေယျာသော်
ပွဲကို အနုပညာနဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးက လူငယ်များ အများအပြားတက်ရောက်ကြကာ ပရိသတ် တထောင်ကျော်ခန့် ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ပွဲတက်ရောက်ခြင်း မရှိတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်နဲ့ လူထုစိန်ဝင်းတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုအမှာစကားများကို ဖွင့်လှစ်တင်ဆက်ခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ထိုနေ့က ပွဲမှာ မြန်မာစီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမျိူးမြင့်၊ အင်န်အယ်ဒီဗဟိုကော်မီတီဝင် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်တို့ရဲ့ အခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ဧရာဝတီကို ဘယ်လို ကာကွယ်လို့ရတယ် စတဲ့စာတမ်းများနဲ့ စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင်ရဲ့ စာစုတခုကို ဖတ်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
နေထက်နိုင်၊ တိုးနှောင်မိုး၊ ၀ိုင်ချိူ၊ ဦးသောဘိတ၊ သူရဇော် စတဲ့ ကဗျာဆရာများက ကဗျာများ ရွတ်ဆိုခဲ့ကြပြီး ဇေယျာသော်၊ အနဂ္ဂ၊ ရန်ရန်ချမ်း၊ ဆောင်းဦးလှိုင်တို့က ဟစ်ဟော့သီချင်းများနဲ့ လှုံဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဧရာဝတီကို ထာဝရရှင်သန်စေလိုသူများက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ လူငယ်ထုတရပ်လုံးက အမျိူးသားရေးတာဝန်တရပ်အနေနဲ့ ပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဧရာဝတီဟာ ကမ္ဘာတည်နေသ၍ တည်တံ့ရမယ့် မြစ်ကြီးတစင်းဖြစ်တာကြောင့် ဒီအရေးကိစ္စအပေါ်မှာ အစိုးရတဖွဲ့၊ လွှတ်တော်တရပ်၊ အဖွဲ့အစည်းတခုခုကပဲ ဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်း ယခုပွဲကို တာဝန်ခံစီစဉ်တဲ့ ၈၈ မျူိးးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့က ကိုမြတ်သူက တင်ပြသွားကြောင်း သိရပါတယ်။
လှုံဆော်ပွဲမှာ ကိုရဲလွင်၊ သားထွေး၊ ကိုကီးဂျွန်တို့ ဂီတအဖွဲ့နဲ့ ကိုခင်ဝမ်းရဲ့ "ဧရာဝတီ"၊ ထူးအ်ိမ်သင်ရဲ့ "ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီး"၊ ကိုရဲလွင်ရဲ့ "ငြိမ်းချမ်းရေး" စတဲ့သီချင်းများကို ပရိသတ်နဲ့အတူ ပူးပေါင်းသီဆို ဖျော်ဖြေကြရင်း ဧရာဝတီကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြဖို့ သန္နိဋ္ဌာန်တွေ ပိုမိုခိုင်မြဲလေးနက်စေခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
စနေ, 24 စက်တင်ဘာ 2011
(ဗိုလ်ချုပ်ကက်စိန် OTS 29၊ ၁၉၆၄ = ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် သခင်ဗဟုန်၏ သား။ န၀တအဖွဲ့ဝင် စစ်တိုင်း မှူးများ ၁၉၉၂ တွင် ၀န်ကြီးများ ဖြစ်သွားကြပြီးနောက်၊ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဒုတိယအသုတ် စစ်တိုင်းမှူးများထဲ တွင် အရှေ့ တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မော်လမြိုင်) တိုင်းမှူး ဖြစ်လာပြီး၊ ၁၉၉၇ တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ရာက၊ ၂၀၀၆ တွင် အငြိမ်းစားယူခွင့် တောင်းခံပြီး၊ အနားယူသွားခဲ့သူ)
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စယင်းလပ် မြန်မာနိုင်ငံ သွားမည်
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စ ယင်းလပ်ရှီန၀ဒ် ဟာ လာမယ့်အောက်တိုဘာလဆန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Surapong Torwijakchaikul က ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
(၆၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ကျင်းပရာ နယူးယောက်မြို့မှာ မစ္စတာ Torwijakchaikul က ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ်အနေနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို သွားရောက် မိတ်ဆက် နုတ်ဆက်တာ ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စ ယင်လပ် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်ကလည်း ဘရူနိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား နဲ့ လာအိုနိုင်ငံတို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့မှာတော့ မစ္စ ယင်းလပ်ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံကို သွားရောက်မှာပါ။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွက် မြန်မာအစိုးရရဲ့ အတည်ပြု ပြန်ကြားချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံ သဘာပတိနေရာ ရယူရေးကို ထိုင်းနိုင်ငံက ထောက်ခံထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စ အရေးတယူ စဉ်းစားနေကြောင်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ပြော
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မရှိဘူးလို့ ယူဆပေမယ့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း က မိမိတို့နဲ့ တွေ့ဆုံတိုင်း ဒီကိစ္စကို အလေးထား ပြောဆို နေကြတဲ့အတွက် မိမိတို့ကလည်း အရေးတယူ စဉ်းစားနေပါကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင်က RFA ကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အကျဉ်းသားအားလုံးကို ထောင်ဒဏ်တနှစ်စီ လျှော့ပေါ့ပေးပြီး အင်္ဂါနေ့မှစပြီး အကျဉ်းသား ၁၇ ၀၀၀ ကို စတင် လွှတ်ပေးနေကြောင်း ဦးသိန်စိန် အစိုးရက ကြေငြာခဲ့ပြီး သော်လည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် အကျဉ်းထောင်တွင်း ကျန်ရှိနေသေးသည့်အပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲအစည်းများက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။ ဓါတ်ပုံ (AFP)
အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးအတွက် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ချင့်ချိန် လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ ယူဆကြောင်းလည်း သူက ပြောပါတယ်။
“အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှ တောင်းဆိုနေတဲ့အတိုင်း ဒီလူတွေကို ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ခြင်း လွှတ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတာ့ ကျနော်ထင်တယ်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနဲ့လည်း အများကြီး စဉ်းစားစရာတော့ အခြေအနေတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အပြောင်းအလဲလေး ကာလလေးထဲမှာ ဘာလိုအပ်သလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့က တိုးတက်မှုလည်း လိုအပ်တယ်၊ တည်ငြိမ်မှုလည်း လိုအပ်တယ်၊ တိုးတက်မှု တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကို အကုန်လုံးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချုပ်ကိုင်ထားဖို့ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ လွတ်လပ်မှု ဆိုတာလည်း လိုအပ်တယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီ ၃ ခုကို ကျနော်တို့က မျှမျှတတ ချိန်ညှိပြီးတော့မှ သွားရတာပေါ့နော်။ သွားရတဲ့အခါကျတော့ တဘက်မှာလည်းပဲ ဒီတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့၊ တဘက်မှာလည်းပဲ တိုးတက်မှုရအောင်၊ တဘက်ကလည်း လူတွေ ကျေနပ်အောင်၊ လွတ်လပ်မှုကိုလည်း ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကို အားလုံးကို သူတို့ ချိန်ဆနေရတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်”
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP က ပြောဆိုတဲ့ အရေအတွက်နဲ့ အစိုးရက ပြုစုထားတဲ့ အရေအတွက် ကွာခြားမှု ရှိနေတယ်လို့လည်း ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြောပါတယ်။
“အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ ပြောနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စာရင်းကတော့ ၂ ထောင်ကျော် ပေါ့နော်၊ ၂ ထောင်ကျော် ဆိုတာလည်းပဲ ထိုင်းနယ်စပ်ရဲ့ ဟိုဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ အေအေပီပီ အဖွဲ့တို့ဘာတို့က ပြုစုထားတဲ့ သတင်းပေါ့။ ဘယ်လောက်ကြီးတိကျတယ် ဘယ်လောက် မတိကျဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့လည်း သိပ်တော့ မသိဘူး။ သို့သော် သက်ဆိုင်တဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ ဒီ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ဘာတို့က ပြန်စိစစ်တော့ သူတို့ပြောတဲ့ စာရင်းလောက်တော့ မရှိတော့ဘူး။ တချို့အတိုင်းအတာရှိတယ်ပေါ့နော် ကျနော် သိပ်ပြီးတော့ အရေအတွက်တော့ မသိဘူး။ သို့သော် အဲဒီအထဲမှာတောင်မှပဲ တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် Serious Crime ပေါ့၊ အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် အကြမ်းဖက်တဲ့ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုတွေ၊ နောက် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုတွေ၊ လူသတ်မှုတွေ စတဲ့ အမှုကြီးတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ လူတွေထဲ ဒီစာရင်းထဲမှာ ရာနဲ့ချီပြီးတော့မှာ ပါနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။”
(မှတ်ချက် - ရာနှစ်ဆယ်လောက်လေးပါ)
အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးကိုကိုလှိုင် ပါဝင်တဲ့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က နယူးယောက်မြို့ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဒဲရစ် မစ်ချဲလ် အပါအဝင် အမေရိကန် အစိုးရပိုင်းက အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ဆုံကာ မနေ့က ညနေပိုင်းမှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကနေ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်သွားသူတွေက ကျန်ခဲ့ သူတွေကို သစ္စာဖေါက်သူများအဖြ...
ဂြိုလ်တု ပျက် စနေ နေ့ အစောပိုင်း အမေရိကန် နိုင်ငံ ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စ အရေးတယူ စဉ်းစားနေကြောင်း အ...